မေလ 2016 - စာမျက်နှာ3- NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » 2016 » မေ (စာမျက်နှာ 3)
Bon Ikan မှတစ်ဆင့်အခုတော့သီးသန့်ရရှိနိုင်စောင့်ကြည့်။
Houston, Texas ပြည်နယ်, (မေလ 27, 2016) - Ikan အခုသူတို့ဘွန်တစ်ခုလုံးရဲ့ထုတ်လွှင့်, လယ်ပြင်မြင့်မားရောင်ခြည်နှင့်မှတ်တမ်းများမော်နီတာ၏လိုင်းအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားအဘို့ (ကနေဒါဖယ်ထုတ်ပြီး) မြောက်အမေရိကနှင့်တောင်အမေရိကအတွက်သီးသန့်ဖြန့်ဖြူးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည် ဗီဒီယိုကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း။ ဘွန်တစ်ကမ္ဘာကျော်တောင်ကိုရီးယားမော်နီတာထုတ်လုပ်သူ, သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုအရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရအဖြစ်ထုပ်ပိုးများအတွက်လူသိများသည် ...
Bluefish444 နှင့် Visual သုတေသန Inc မှ Technologies ကပေါင်းစပ်
Bluefish444, စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေး compressed လုပ်မထားတဲ့ 4K / 2K / HD ကို / SD က SDI ကဗီဒီယိုကဒ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရုပ်မြင်သုတေသန Inc ကို (VRi), Real-time 3D ဂရပ်ဖစ်တစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, အဲဒါကို Visual သုတေသန Inc ကိုအတူပူးပေါင်းထားပြီးကြေငြာခဲ့သည် ထုတ်ကုန်များ KarismaCG မိသားစုသို့သုံး Bluefish444 ကဗီဒီယိုကတ်များပေါင်းစပ်။ အဆိုပါယုဂ် | ဆူပါနိုဗာက S + ယုဂ် | ဆူပါနိုဗာ CG နှင့်ယုဂ် | နျူထရွန်အစွန်းရောက်အနိမ့်အောင်းနေချိန်ကဗီဒီယိုကတ်များ ...
pixel ပါဝါ VisionTops နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့
Booth 5E4-06, အသံလွှင့်အာရှ 2016: Pixel ပါဝါသည်အလိုအလျောက်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ဂရပ်ဖစ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဘေဂျင်း VisionTops နည်းပညာနှင့်အတူတစ်ကြီးထွားလာပူးပေါင်းဆက်ဆံရေးမျိုးခံစားဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂုဏ်သတင်းနှင့်အတူတရုတ် System Integration ယခုမှန်မှန်က၎င်း၏အဓိကကန်ထရိုက်အတွက် Pixel ပါဝါကနေရှင်းလင်းမှု 3D ဂရပ်ဖစ်စနစ်များလည်းပါဝင်သည်။ "Pixel ပါဝါနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့မပေးရုံအကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေးကိုရရှိမည်ကိုသိပေမယ့် ...
axon ANGACOM2မှာ SMART MPEG-2016 ဒီဗွီဘီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးစောင့်ကြည့်မှုတခုအဖြစ်မှ
axon ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်း, ထုတ်လွှင့်ကွန်ရက်တစ်ခုအခြေခံအဆောက်အအုံဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းယခုနှစ်ရဲ့ ANGACOM, 7-9 ဇွန်လ (10.1 / T30 ရပ်) မှာပြပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်သူ၏ clients များအဓိကထုတ်လွှင့်, network operator များမှနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါဝင်သည်အဆိုပါကုမ္ပဏီ, စောင့်ကြည့်မှု, အစီရင်ခံခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများအတွက်ဆုရထုတ်ကုန်များ၏အကွာအဝေးကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ axon SMART ဒီဗွီဘီ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ MPEG-2 နှင့်ဒီဗွီဘီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီး၎င်း၏ပလက်ဖောင်းတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ...
Domo အသံလွှင့်အာရှ 2016 မှာအသစ်သောအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ထုတ်ကုန်ကိုရည်ညွှန်းပြသ
broadcast အာရှ 2016, ရပ်: 5B1-06: Domo Tactical ဆက်သွယ်ရေး (ဖဲကြိုးဖြတ်ကိုလန်ဘို Cobham) ထုတ်လွှင့်အာရှ 2016 မှာ၎င်း၏အမည်အသစ်အောက်တွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြနေသည်။ အဆိုပါပြောင်းလဲမှု Cobham Tactical ဆက်သွယ်ရေးနှင့် Surveillance အတော်ကြာ "Non-core ကို" အဖွဲ့အစည်းများ, divest တစ် Cobham Plc မဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြောင်းဟောင်းတဦးမိဘကုမ္ပဏီ Cobham Plc တို့ကဇန်နဝါရီလ 2016 အတွက်ကြေညာချက်နောက်တော်သို့လိုက် ...
ingenium တည်နေရာ: New York ကနယူးယော့အမေရိကန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးထွားလာအဖွဲ့က join ဖို့အတွေ့အကြုံရှိအန်းဒရွိုက်အင်ဂျင်နီယာရှာကြ၏။ သငျသညျထုတျလုပျမှုက Android Applications ကိုအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသင့်တယ်နဲ့အတူတွေ့ကြုံရမည် ... နောက်ထပ် >>
ATEME အင်အားကြီးနိုင်ငံများ AB Group ၏ပထမဦးဆုံး Native 4K Channel ကို
ပဲရစ်, MIAMI, စင်္ကာပူ, 26 မေ, 2016 - ATEME AB Group, ပြင်သစ်ရဲ့ပထမဆုံးလွတ်လပ်သောထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် 16 ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများနှင့်အတူနိုင်ငံအတွင်းအကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးက၎င်း၏ပထမဦးဆုံးဇာတိ 4K-UHD ပရီမီယံရုပ်သံလိုင်းထုတ်လွှင့်ဖို့ ATEME ရဲ့ Titan တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ထားသည့်ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ။ က Ultra သဘာဝတရားကိုခေါ် channel ကို, မေလ 19th ကတည်းကပြင်သစ်တွင်ရရှိနိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထံအပ်နှံဖြစ်ပါတယ် ...
သူနာပြု, စက်ပြင်, ဥပဒေစတင်အာဏာတည်ခြင်း, အင်ဂျင်နီယာ, အမြောက်တပ်, သင်ကအမည်!
အမေရိကန်ကြည်းတပ် Active ကို Duty / တပ်မတော် Reserve တည်နေရာ: တောင်ပေါ်က Clemens MI အမေရိကန် 12B Combat Engineering ။ 12A Engineering Senior တပ်ကြပ်ကြီး။ !!! NO အတွေ့အကြုံလိုသင်၏အလုပ်အတွက်ပေးချေဉျသင်တန်း GET !!! * ... ။ more >>
3 ၏စာမျက်နှာ 32«12345	»	102030...နောက်ဆုံး»